Maraykanka Oo Xayiraad Ku Soo Rogay Dad U Dhashay Ruushka – somalilandtoday.com
Maraykanka Oo Xayiraad Ku Soo Rogay Dad U Dhashay Ruushka
(SLT-Washington)Dowladda Mareykanka ayaa xayiraado dheeraad ah ku soo rogtay dhawr qof iyo ururro lala xiriirinayo tallaabadii Ruushku uu u goostay gobolka Crimea sanadkii 2014.
Laba qof oo reer Ukraine ah iyo mid Ruushka u dhashay ayaa xayiraadahani cusub lagu bartilmaameedsaday. Sidoo kale sagaal shirkadood oo kale oo laga leeyahay waddamada Ruushka iyo Ukraine ayaa iyana xayiraado lagu soo rogay.
Mas’uul ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda dhexe ee Ruushka ayaa isaguna lagu bartilmaameedsaday xayiraadahan Mareykanka.
Weriyaha BBC-dam ee Washington ayaa sheegaya in tallaabadani uu Mareykanka qaaday ay ku soo beegmeyso xilli madaxweyne Trump lagu dhaliilayo in uu aad ugu debacsan yahay dowladda Ruushka marka loo eego maamulkiisa.
Bartamihii bishii Maarso ee sanadkii 2014 ayaa madaxweynaha Ruushka, Valadamir Putin, waxa uu saxiixay amar lagu aqoonsanayo madaxbannaanida Gobolka Crimea